Disc Granulation Production Line - YiZheng Heavy Machinery Co, Ltd.
Iyo yakazara uye dzakasiyana diski granulation yekugadzira tambo maitiro ndeimwe yeakakosha mabhenefiti eHenan Zheng Heavy Maindasitiri. Isu tine ruzivo mukuronga uye nekushandira kwakasiyana mitsara yekugadzira manyowa. Isu hatisi kungo tarisa pane ese maitiro ekubatanidza mune yekugadzira maitiro, asi zvakare gara uchinzwisisa iyo yega yega maitiro pane ese ekugadzira tambo uye kubudirira kubudirira kupindirana. Isu tinopa yakakwana uye yakavimbika yekugadzira mitsara mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo nevatengi.
Iyo disc granulator yekugadzira tambo inowanzo shandiswa kugadzira komputa fetiraiza. Kazhinji kutaura, fetiraiza yemubatanidzwa ine maviri kana matatu zvinovaka muviri (nitrogen, phosphorus, potasium). Iine hunhu hwehuwandu hwemuviri yezvakanaka uye mashoma mhedzisiro. Composite fetiraiza inoita basa rakakosha pakuenzanisa kwehukama. Izvo hazvigone chete kugadzirisa kuvandudza kushanda, asi zvakare kusimudzira yakagadzikana uye yakakwira goho rezvirimwa. Iyo tambo yekugadzira ye disk granulator mhinduro yakanaka yekuwana yemhando yepamusoro uye yakakwira kugadzirwa kweyakaunganidzwa fetiraiza. Iyo yekugadzira mutsara inogona kuburitsa NPK fetiraiza, DAP fetiraiza uye imwe komponi fetiraiza zvikamu.
Zvishandiso zvinogadzirwa zvemubatanidzwa kugadzira fetiraiza
Izvo zvigadzirwa zvekugadzirwa kwecompire fetiraiza iurea, ammonium chloride, ammonium sulphate, liquid ammonia, ammonium monophosphate, diammonium phosphate, potasium chloride, potasium sulfate, kusanganisira imwe ivhu uye zvimwe zvinoumba.
Iyo yekugadzira tambo ye diski granulator yakafambiswa, inoshanda uye inoshanda, iyo michina chimiro iri compact, iyo otomatiki yakakwira, mashandiro ari nyore, uye zviri nyore kune batch kugadzirwa kwemubatanidzwa fetiraiza.
1. Midziyo yese inogadzirwa necorros-resistant uye inopfeka-isingagadziriswe zvinhu.
2. Kugadzira kugona kunogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
3. Hapana marara matatu, simba rekuchengetedza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Inomhanya zvishoma uye iri nyore kuitisa.
4. Mutsara wekugadzira fetiraiza haugone kuburitsa fetiraiza yepakati, yepakati uye yakadzika, asi zvakare inogadzira fetiraiza, inorganic fetiraiza, fetiraiza, manyowa yemagineti, etc. iyo granulation mwero wakakwira.
5. Kurongeka kwetambo rese rekugadzira iri compact, yesainzi uye inonzwisisika, uye tekinoroji iri kumberi.
Iyo yekugadzira tambo michina ye diski granulator inosanganisira zvigadzirwa imba yekuchengetera → musanganisi (musanganiswa) → disk granulator (granulator) → dhiramu nesefa muchina (disting pakati peyakaganhurirwa zvigadzirwa uye zvakapedzwa zvigadzirwa) → yakatwasuka cheni crusher (kutyora) → otomatiki ekuputira muchina (kurongedza) → bhandi rekutakura (kubatanidza kwemaitiro akasiyana siyana) uye zvimwe zvishandiso Cherekedza: iyi tambo yekugadzira ndeyekureva chete.
Iyo yekuyerera kuyerera kwedhisiki granulator yekugadzira tambo inogona kazhinji kukamurwa kuita:
1. Raw zvigadzirwa zvinoshandiswa
Chekutanga pane zvese, govera mbichana zvinhu zvakaenzana. Raw zvigadzirwa zvinosanganisira urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate, ammonium phosphate (ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium monophosphate, calcium carbonate), potasium chloride, potasium sulphate, nezvimwe. Zvakasimba mbichana chiyero chinogona kuona yakakwira manyowa manyoro.
2. Raw mbichana kusanganisa maitiro
Zvese mbishi zvinhu zvakasanganiswa uye zvakamutswa zvakaenzana mu blender.
3. Yakavhunika maitiro
Iyo yakatwasuka cheni crusher inotswanya zvidimbu zvidimbu zvezvidimbu zvidimbu zvidiki zvinogona kusangana nezvinodiwa zvegranulation. Ipapo bhandi rinotakura rinotumira zvinhu mumuchina wedisiki granulation.
4. Granulation maitiro
Iyo diski kona yeiyo disk granulation muchina inotora arc chimiro, uye bhora rinoumba chiyero rinogona kusvika zvinopfuura 93%. Mushure mokunge zvinhu zvapinda mukapu yegranulation, kuburikidza nekuenderera kutenderera kweiyo granulation diski uye mudziyo wechipfapfaidzo, izvo zvinhu zvakasungwa zvakasungwa pamwechete kuti zvibudise zvidimbu zvine yunifomu chimiro uye yakanaka chimiro. Dhisiki granulator chishandiso chakakosha pamutsetse wekugadzira weyakaunganidzwa fetiraiza.
5. Kuongorora maitiro
Izvo zvinhu zvakatonhora zvinoendeswa kune roller roller sieve muchina wekuongorora. Zvigadzirwa zvinokodzera zvinogona kupinda mudura rakapedzwa kuburikidza nebhandi rinotakura, uye rinogona zvakare kuiswa mumapepa. Izvo zvisina kukwana zvikamu zvinodzoka kuzodzokazve.
Kupakata ndiyo yekupedzisira maitiro ekomboni fotereza yekugadzira mutsara. Chigadzirwa chakapedzwa chakarongedzwa neine zvakakwana otomatiki huwandu hwekupakata muchina. Iyo yakakwira degree of otomatiki uye yakanyanya kushanda kwete chete kuti uwane chaiyo kuyerwa, asi zvakare zvakaisvonaka kupedzisa yekupedzisira maitiro. Vashandisi vanogona kudzora iyo yekumhanyisa kumhanyisa uye kumisikidza iyo yekumhanyisa parameter zvinoenderana nezvinodiwa chaiko.